तपाईको आजको भाग्य यस्तो छ : २०७७ वैशाख २६ गतेको राशिफल – Sagarmatha Online News Portal
तपाईको आजको भाग्य यस्तो छ : २०७७ वैशाख २६ गतेको राशिफल
आज वि.सं. २०७७ वैशाख २६ गते शुक्रवार । तदनुसार इ.स. २०२० मे ८ तारिख । नेपाल सम्वत ११४० बछलागा । ज्येष्ठ कृष्णपक्ष । प्रतिपदा १४ः५८ उप्रान्त द्वितीया ।
नयाँ अवसरका साथै स्रोत-साधन समेत जुट्नाले दिन उत्साहजनक रहनेछ । प्रतीक्षा गरिएको उपलब्धि प्राप्त हुनुका साथै मनग्य धन लाभ हुनेछ । दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ । सोख पूरा हुनेछ भने विभिन्न भौतिक साधन प्राप्तिको योग छ । नयाँ ज्ञानले अध्ययनमा उत्साह जगाउनेछ । सुमधुर दाम्पत्यले प्रफुल्लित भइनेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने समय छ ।
द्वेष तथा ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन् । चुनौती चिर्दै काम बनाउन सकिनेछ । स्वास्थ्य सबल रहनेछ भने पराक्रमद्वारा अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ । तत्काल फाइदा नभए पनि दिगो आर्थिक लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ । पछिका लागि लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । रोकिएका काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ । मिहिनेतले प्रतिस्पर्धाको दौडसमेत जिताउन सक्छ ।
शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन् । लगनशीलताले राम्रै उपलब्धि दिलाउनेछ । प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ । चिताएका काम बिस्तारै भए पनि सम्पादन हुनेछन् । पढाइलेखाइमा प्रगति हुनेछ । सेवामूलक कामबाट धनलाभ हुनेछ । सन्तान वा सहयोगीका माध्यमबाट काम बन्ने देखिन्छ । आफ्नो प्रतिभाको कदर हुनेछ । बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा पनि अरूलाई उछिन्न सकिनेछ ।
व्यावसायिक काममा चुनौती देखिए पनि घरमा लक्ष्मी अर्थात् द्रव्य भित्र्याउने समय छ । आजको कामले दिगो फाइदा हुनेछ । मित्रजन सहयोगीका रूपमा देखा पर्नेछन् । रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा लाभ हुनेछ । अरूको सुझावमा भर नपर्नुहोला । आफन्त र परिवारजनको सहयोग लिँदा राम्रो हुनेछ । महत्त्वाकांक्षी योजना तत्काल सार्वजनिक भने नगर्नुहोला ।
छोटो समयमा उपलब्धि हातलागी हुनेछ । गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । मिहिनेतले दैनिकीमा परिवर्तन आउनेछ । रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ । उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ । शत्रु र प्रतिस्पर्धीलाई सजिलै हराउन सकिनेछ । नौलो प्रकृतिको काम शुभारम्भ गर्ने मौका छ । प्रयत्न गर्दा दिगो काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ ।
तार्किक क्षमता बढ्नेछ भने बुद्धिको माध्यमले लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ । मिहिनेत गर्दा अध्ययनमा प्रगति हुनेछ भने ज्ञान र कलालाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । तारिफयोग्य काम सम्पादन हुनाले प्रशंसकहरू बढ्नेछन् । दिगो कामको जग बसाउनुका साथै दाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । पहिले बिग्रिएको काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा लाभ उठाउन सकिनेछ ।
रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ । बिछोडिएका आफन्तसँग भेटघाट होला । प्रयत्न गर्दा अरूका कमजोरीबाट फाइदा उठाउने समय छ । अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ । पहिलेको सफलताले कार्यक्षेत्रमा हौसला जगाउनेछ । दिगो काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ । मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउनेछ ।
खर्च बढ्नाले धेरै रकम जोहो गर्नुपर्ला । आफन्तबाट टाढिनुपरे पनि टाढाका साथीभाइसँग सम्पर्क बढ्नेछ । नयाँ कुरा पाउन केही वस्तु त्याग्नुपर्ला । प्रयत्न गर्दा जटिल ठानिएको काम समेत सम्पादन हुन सक्छ । मिहिनेतले प्रतिद्वन्द्वीलाई परास्त गर्न सकिनेछ । अरूले आँट्न नसकेको काम आफ्ना लागि लाभदायक बन्न सक्छ । सोखले विलासी वस्तुहरूमा खर्च गराउनेछ ।
तारिफयोग्य कामले चर्चामा ल्याउन सक्छ । प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको सहयोग जुट्नाले सजिलै लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ । विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् भने दिगो काममा जग बसाउने मौका छ । साइनो गाँस्नेहरूबाट जोगिएर काम गर्नुहोला । सोखले थालिएको काम व्यवसायमा रूपान्तरित हुनेछ । मेहनतीहरूलाई कार्य्सिद्धिको समय छ । नाम, दाम र इनाम हातलागी हुनेछ ।
तारिफयोग्य काम गर्दै प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने समय छ । समाजले पदीय जिम्मेवारी दिलाउनेछ । नसोचेको अवसर प्राप्त हुनाले मन प्रफुल्लित हुनेछ । टाढिएका साथीभाइ नजिकिनाले हर्ष बढ्नेछ । भाग्यले विभिन्न अवसर दिलाउनेछ । काम देखाएर फाइदा लिने समय छ । शुभचिन्तकहरूको साथले पहिलेको चुनौती समाप्त होला । मिहिनेतले दाम, इनाम र हातपार्न सफल भइनेछ ।
परिस्थितिको चक्रमा अलमलिनुपर्दा कार्यसम्पादनमा समय लाग्नेछ । अस्वस्थताले कमजोरीको अनुभूति हुनेछ । चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपरे पनि मिहिनेतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ । शुभचिन्तक र प्रतिस्पर्धीलाई समेटेर काम लिनुपर्ला । योजना पूर्ण नभए पनि आंशिक लाभ अवश्य हुनेछ । काम तत्काल सम्पादन नभए पनि पछिका लागि सकारात्मक संकेत प्राप्त हुनेछ ।